Ny Mac Pro dia iray amin'ireo ekipa hanavao amin'ity taona ity | Avy amin'ny mac aho
Ny Mac Pro dia iray amin'ireo ekipa hanavao amin'ity taona ity
Tsy dia betsaka ny vaovao momba an'ity ekipa matihanina ity ary tsy momba ny mety hanavaozana azy ny fitaovana natomboka tamin'ny Desambra 2019 dia mety hisy fanavaozana amin'ity taona ity zava-dehibe. Amin'io lafiny io, Apple dia nanisy fanovana ny Mac Pro teo aloha antsoina hoe "fitoeram-pako" mba hahafahan'ny solosaina havaozina rehefa mandeha ny fotoana ary nahavita nanitatra ny tombotsoan'ireo solosaina ireo ny mpampiasa matihanina satria tsy azo atao izany taloha.
Amin'izao fotoana izao dia toa mety mieritreritra ny handefa Mac Pro vaovao ny orinasa Cupertino amin'ity faran'ny taona ity saingy tsy dia misy loatra ny famantarana momba izany. Ireo torolàlana momba ny fividianana dia manondro fa miandry na mitandrina isika rehefa manomboka ny tenantsika ho Mac Pro ary efa roa taona izao no lasa azo atao ny manapa-kevitra ny hanavao ity fitaovana mahatalanjona sy matanjaka ity i Apple.
Amin'ireto tranga ireto, isaky ny manangana ekipa vaovao amin'ireo tombontsoa ireo isika, dia tsy maintsy tadidintsika ireo lafin-javatra sasany. Mazava fa raha mila ny solosaina isika dia tsy afaka miandry ny hividy intsony ary tsy maintsy misafidy ny ankehitriny, amin'ireto tranga ireto dia ampirisihinay foana hisafidy modely farany azo inoana satria azo antoka fa avy amin'ny solosaina taloha isika ary manavao modely taloha. Tsy ho mendrika izany. Fa raha tsy maika isika na maharitra ny ekipantsika, dia tsara kokoa ny miandry.
Angamba ny Mac Pro vaovao alefan'ny Apple eny an-tsena dia manana endrika mitovy amin'ny an'ny maodely ankehitriny, fa ny singa anatiny kosa dia hahita fiovana lehibe hanomezana zava-baovao sy hery farany ambony azo atao. Tsy fantatra ny fampiharana ny processeur Apple Silicon ao anatin'ireto Mac Pro vaovao ireto, fa raha miafara amin'ny fahatongavany dia tena matanjaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » Mac Pro » Ny Mac Pro dia iray amin'ireo ekipa hanavao amin'ity taona ity
AirTags dia nohavaozina amin'ny firmware vaovao 1.0.276
Hafatra amin'ny Mac: "Takiana ny fanavaozana ny rindrambaiko hifandraisana amin'ny fitaovana iOS anao"